Daawo gabar 4 sano jir ah oo baabuur ku dhexwada wado gawaari badani ku socoto – SBC
Daawo gabar 4 sano jir ah oo baabuur ku dhexwada wado gawaari badani ku socoto
Waalid u dhashay wadanka Shiinaha ayaa ku dhaqaaqay masuuliyad daradii ugu xumeyd ka dib markii ay gabadhooda oo 4 sano jir ah ay u ogolaadeen inay shufeer ka noqoto baabuurkooda isla markaana ay ku dhex wado wado aad u mashquul badan oo ah High way.
Gabadhan oo Aabaheed magaceeda ugu yeerayey Jia Zheng ayaa mudo 2 daqiiqo ah waxay gaariga si xarago leh oo aanay cabsi ku jirin ugu dhexwadey fatuurada wadada arintaasi oo argagax balaaran.
Labadii daqiiqo ee Jia ay gaariga wadey waxaa hereeraha ka mareyey gawaari waa weyn oo qaarkood xawaare sare ku socdeen waxaana xiligu uu ahaa xili roob shaguugax ah uu da’ayey, iyadoo gabadhaasi qaladka kaliya ee ay gashay uu ahaa iyadoo gaarigii ka horeeyey ka baastey dhinaca bixid halkii ay ka dhaafi laheyd dhanka midig, waxaana markii dambe filimka ka muuqanaya Aabaheed oo la hadlaya una sheegaya inay gaariga joojiso isla markaana uu isagu gaariga ka noqdey shufeer ama darawal.
Aabahan falkan naxdinta badan ku dhaqaaqey ayaa u adeegsadey sheeleraha gaariga in uu saaro bir si uu u socdo, waxaana dhacdadan oo ka dhacdey Shondong la sheegay in haatan baaritaan lagu hayo waalidkaasi balse booliiska & laamaha amaanka wadooyinka ay sheegeen inaanay soo saari karin waalidkaasi.
“Hadii aan qaban laheyn waalidkaasi waxbaan bari laheyn” ayuu yiri sarkaal ka tirsan laamaha amaanka wadooyinka.
Si aad u daawato sheekadan qosolka & yaabka leh guji link Video –ga hoose.HALKAN RIIX